The Farnese အပြာရောင် - Sotheby's ရှိတော်ဝင်ရာဇဝင် - မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်
လေလံ အပြာရောင်စိန် အမြင့်ရတနာ ရတနာပုံပြင်များ သက်သေပြ၏ရတနာ Kings & Queens Sotheby ရဲ့
Farnese Blue - Sotheby's မှတော်ဝင်သမိုင်း
မတ်လ 23, 2018
Tသူ Farnese အပြာရောင်စကားလုံး၏အဓိပ္ပာယ်အရ, ဘဏ္aာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒဏ္fromာရီကနေလာမယ့် အိန္ဒိယ Golconda သတ္တုတွင်း, Farnese အပြာရောင်ကိုဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းများမှ Elisabeth Farnese, Spanish of Queen (1692-1766) ကိုပေးခဲ့သည်။ ၁၇၁၄ ခုနှစ်၊ ပါရာရှိစပိန်ဘုရင် Phillip V အား El လိရှဗလက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်သည့်အခါမင်္ဂလာဆောင်လက်ဆောင်။
is လိရှဗ Farnese, စပိန်ဘုရင်မ (1692-1766)
တကယ်တော့ Farnese Blue ဟာဘုရင်မအသစ်အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့ဖှဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သို့သော်ဆယ်ရက်ကြာရွက်လွှင့်ပြီးသည့်နောက်တွင်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းသည်ရွှေနှင့်ကံကြမ္မာကိုသယ်ဆောင်လာသည့်ဖလော်ရီဒါပင်လယ်ကွေ့ရှိသဲအိတ်အများစုကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။
သင်္ဘောတစ်စီးတည်းသာအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးဒဏ္legာရီအရ၎င်းသည် Farnese Blue ကိုယ်နှိုက်ကိုတင်ဆောင်ထားသောသင်္ဘောဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Farnese အပြာရောင်တစ် ဦး လည်စည်း -pin ကိုအဖြစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဒီသမိုင်းဝင်ကျောက်မျက်ရတနာကိုဖိလစ်ပိုင်ကအဲလစ်ဇဘက် Farnese၊ စပိန်ဘုရင်မ၊ စပိန်နိုင်ငံ Philippe V ၏ဇနီး၊ ဒီကျောက်မျက်ရတနာပိုင်တဲ့ Monsieur le Comte of Villafranca ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ ”
Farnese Blue သည်တော် ၀ င်မိသားစုများအတွင်းနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကြာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခဲ့ပြီး Charles II (၁၇၉၉-၁၈၈၈) Duke of Lucca သည်၎င်းအားချည်နှောင်ထားသည့်တိုင်အောင်ပိုင်ရှင်အမျိုးမျိုးသို့ဆင်းသက်လာသည်။
နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်မှတ်တမ်းတွင်ပါရင့်ကျောက်မျက်ရတနာများ (၁၈၈၀-၁၉၅၉)၊ သူ၏ဇနီးမာရီယာအန်နာဗွန်ဟပ်စ်ဘတ် (၁၈၈၂-၁၉၄၀)၊ သြစတြီးယား၏ Archduchess မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ယနေ့ခေတ်တွင်စာဖြင့်ရေးသားထားသောမှတ်တမ်းသည်ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားသောကျောက်မျက်ရတနာ၏သမိုင်းကြောင်းကိုသက်သေထူသည်။
လာမည့်မေလ ၁၅ ရက်တွင်ဂျနီဗာရှိ Sotheby's တွင်လေလံတင်တော့မည် Sotheby's International Jewellery Division ဥက္ကဌနှင့် Sotheby's Geneva ပူးတွဲဥက္ကChairman္ဌ David Bennet said:
လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော Golconda စိန်မိုင်းများမှထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောလက်တစ်ချောင်းနှင့်လက်ညှိုးကြားတွင်ကိုင်ထားခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုစကားလုံးများဖြင့်ပြောဆိုရန်ခက်ခဲသည်။ ဤကျောက်တုံးသည်နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကြာဥရောပသမိုင်းကြောင်းကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး၊ အရောင်မှာသမိုင်းဝင် Golconda အပြာရောင်ကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်သည့် Hope စိန်နှင့်တူသည်။
Farnese Blue သည်လာမည့်အနာဂတ်၏အဓိကမီးမောင်းထိုးပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည် ခမ်းနားရတနာနှင့် Noble ရတနာ Sotheby's Geneva တွင်လာမည့်မေလ ၁၅ ရက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၇-၅.၃ သန်းရောင်းချရန်ခန့်မှန်းထားသည်။
တော်ဝင်မင်းဆက်နှင့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ဇာတိကျောက်မျက်ရတနာများစိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာသဖြင့်ယခုကျောက်မျက်ရတနာကိုစိတ်ဝင်စားသူများနှင့်စုဆောင်းသူများကမ္ဘာသို့ပြသရန် ပို၍ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။
ကနေပိုပြီးအထူးများ ခမ်းနားရတနာနှင့် Noble ရတနာ လေလံပွဲ။
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရတနာတွေထဲမှာ လေလံတင်ရောင်းချရန်အတွက်အဖြူဆုံးစိန်ဖြူကြီးနှစ်ခု လာမယ့်မေလဂျီနီဗာမှာရှိတဲ့ Sotheby's မှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်လိမ့်မယ်။
စိန်နှစ်မျိုးလုံးသည်ကာရက် ၅၀ ကျော်အလေးချိန်ရှိပြီးစံသတ်မှတ်ချက်အားလုံးတွင်ပြည့်စုံသည်။ စိန်တစ်ခုစီသည်လေလံတင်ရောင်းချမှုတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ဤအနှစ်ခုထူးခြားတဲ့ကျောက်မျက်အကြားပထမ ဦး ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည် တောက်ပသောဖြတ်စိန် ၅၁.၇၁ ကာရက်တစ်လက်စွပ်အဖြစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကြိုတင်ရောင်းရငွေသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၈၇၀,၀၀၀ မှ ၉,၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အလေးချိန် ၅၁ ဒသမ ၇၁ ကာရက်၊
GIA အစီရင်ခံစာပါ ၀ င်သည်။ 2185745311, စိန် D ကိုအရောင်, အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော, Excellent ကဖြတ်, ပိုလန်နှင့် Symmetry ကြောင်း; အတူတူတစ်အမျိုးအစား IIa ခွဲခြားစာနှင့်အတူ။
ဒုတိယစိန်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ် 50.39 ကာရက်ဘဲဥပုံစိန်လွန်းလက်စွပ်အဖြစ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကြိုတင်ရောင်းချမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆,၉၆၀,၀၀၀ မှ ၇,၆၈၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ဒီပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့စိန်ဟာလေလံပွဲမှာပထမဆုံးပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ D Flawless တောက်ပတဲ့ဖြတ်စိန်ဖြစ်တယ်။
၅၀.၃၉ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသော ၅၀.၃၉ ကာရက်ရှိဘဲဥပုံစိန်။
GIA အစီရင်ခံစာပါ ၀ င်သည်။ 2195126527, စိန် D ကိုအရောင်, အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပိုလန်နှင့် Symmetry ကြောင်း; အတူတူတစ်အမျိုးအစား IIa ခွဲခြားစာနှင့်အတူ။
အတူတကွဤအံ့ဖွယ်နှစ်ခုကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းကျော်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။
မေလတွင်ဂျီနီဗာ၌ရောင်းချမည့်စိန်နှစ်မျိုးလုံးသည် D-Color (စိန်ဖြူများအတွက်အများဆုံးတပ်မက်အရောင်) ရှိသည် အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်အလွန်ရှားပါးသောအမျိုးအစားခွဲပိုင် IIa အမျိုးအစား ကျောက်မျက်စိန်များ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာပါ ၀ င်ပြီးအမြင့်ဆုံးသောအလင်းမြင်သာမှုရရှိသည်။ စိန်နှစ်ခုကိုဘော့ဆွာနာနိုင်ငံရှိတင်ဒါတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤကျောက်မျက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေး, Sotheby's International Jewellery Division ၏ Worldwide ဥက္ကChairman္ဌ David Bennet ၄ င်းတို့တွင်ရှိသောသူတို့၏အရည်အသွေးနှင့်စွဲမက်ဖွယ်စွမ်းအားကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
[…] ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်သို့အမှန်တကယ်ထူးကဲသောကျောက်တုံးနှစ်လုံးကိုရောင်းချရန်အတွက် ၀ မ်းမြောက်သည်။ ၎င်းနှစ်ခုလုံးသည်လေလံတင်ရောင်းချရန်အတွက်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စိန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောစိန်များသည်အစဉ်အမြဲစုဆောင်းသူများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများကိုစွဲမက်စေပြီးယနေ့တိုင်အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဤပုံစံနှစ်မျိုးသည်အများဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့်အတိုင်း - ဘဲဥပုံဖြတ်တောက်ထားသောစိန်တစ်လုံးသည်မည်သည့်စိန်ဖြူအတွက်မဆိုကာရက်တစ်လုံးလျှင်စံချိန်တင်စျေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးအကြီးမြတ်ဆုံးမီးနှင့်တောက်ပသောစိန်များ - ဤကျောက်တုံးများတွင်ရှားပါးဆုံးဖြစ်သည်။ အရွယ်အစား။
လာမည့်မှအထူး ခမ်းနားရတနာနှင့် Noble ရတနာ Sotheby's Geneva တွင်လည်းလေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည် အရေးကြီးတဲ့ရတနာ - စပျစ်သီးနှင့်ရှေးဟောင်းရတနာများကိုအလွန်တရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောအတူတကွအရေးပါသောကျောက်မျက်ရတနာများကိုထပ်မံတွေ့ရှိသောပေါင်းစပ်ထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်အညီ။
ပထမ ဦး ဆုံးအမီးမောင်းထိုးပြတစ်ခုဖြစ်သည် အရေးကြီးသောစိန်လည်ဆွဲ, ဘဲဥပုံ, သစ်တော်သီးနှင့် marquise-shaped စိန် featuring ။ ရတနာသည် ၁၅.၅၁ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောသစ်တော်သီးပုံသဏ္ဌာန်စိန်ဖြင့်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဆွဲကြိုးတပ်ဆင်ထားသည်။
တစ် ဦး ၏ပိုင်ဆိုင်မှု
တစ်လျှောက်လုံးမှာဘဲဥပုံ၊ သစ်တော်သီးနှင့် marquise ပုံစံစိန်များဖြင့် ၁၅.၅၁ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသည့်သစ်တော်သီးပုံသဏ္withာန်ရှိသောစိန်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပြီးအရှည်မှာ ၃၉၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။
GIA အစီရင်ခံစာပါ ၀ င်သည်။ 11046160,3ကာရက်အလေးချိန်စိန် D ကိုအရောင်, VS2000 ရှင်းလင်းမှုကြောင်းဖော်ပြထားသည်, 15.51 ဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်စွဲပါ ၀.၅၃ မှ ၂.၀၄ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသောစိန်များသည် D အရောင်ဖြစ်ပြီးအတွင်းဘက်၌ VS0.53 Clarity အထိရှိသည်ဟု GIA အစီရင်ခံစာ ၄၄ ခုနှင့်အတူဖော်ပြထားသည်။
Pre- ရောင်းချမှုခန့်မှန်းချက်အမေရိကန် $ 675,000-970,000
ကာလရတနာ နှင့် provenance နှင့်အတူရတနာ သူတို့၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုအတည်ပြုပါ။ အထူးများဖြင့်အစစ်အမှန်လက်ရာတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးသည် အထင်ကြီးစရာမြနှင့်စိန်လက်ကောက်, 1930.
LONDONDERRY ၏ MARCHIONESS ၏စုဆောင်းမှုမှ, MOUNT Stewart
ကျယ်ပြန့်သောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် baguette စိန်များဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး၊ ဗဟိုဘဲဥပုံ cabochon မြပုံစံကိုဆင်တူသည်၊ အလားတူသတ်မှတ်ထားသောဂျီ ometric မေတြီပတ် ၀ န်းကျင်အတွင်းအရှည် ၁၈၀ မီလီမီတာ၊ အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ်သူရဲ့အမှတ်အသား, တပ်ဆင်အမှု။
မြ၊ စိန်များ၊ ပလက်တီနမ်၊ ရွှေ၊ သစ်သား၊ သားရေ၊ ပိုး။
Pre- ရောင်းချမှုခန့်မှန်းချက်အမေရိကန် $ 340,000-475,000
အထင်ကြီးဖွယ်မြနှင့်စိန်လက်ကောက်, 1930 ။
ဗဟိုမြ cabochon ။
Sotheby's လေလံကတ်တလောက်ထဲကမှတ်စု -
“ တောင်ကြီး Stewart မော်ကွန်းတိုက်တွင်အမည်ပေးထားသောမြ Corrigan လက်ကောက်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ Maharajah မှ Cartier မှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုနားလည်ထားသည့်အလွန်ကြီးမားသည့်အရွယ်အစားကြီးမားသည့်မြကျောက်အတွက်ထင်ရှားသည်။ အိန္ဒိယနှင့် Cartier ၏အသင်းအဖွဲ့သည် ၁၉၀၁ ခုနှစ်မှစတင်ကာဘုရင်မကြီး Queen Collection တွင်အိန္ဒိယရတနာများပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ဘုရင်မအလက်ဇန္ဒြီးယားမှပုဂ္ဂလိကကော်မရှင်ကိုရရှိသောအခါအိန္ဒိယဘုရင်ခံ Mary Mary Curzon ထံမှသူမ၏အင်္ကျီများဖြင့်အိန္ဒိယဝတ်ရုံများကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်ဌာနခွဲကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သောညီအစ်ကိုဂျက်စ်ကာတီယာသည် ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင်ဒေလီ Durbar နှစ်တွင်အိန္ဒိယသို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်သူသည်ရှေးဟောင်းအိန္ဒိယရတနာများစွာကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးရှေးဟောင်းကျောက်မျက်များအဖြစ်ရောရောင်းဝယ်ခဲ့သည့်ပစ္စည်းအချို့ကိုလည်းပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ နိယာမကျောက်များအသုံးပြုခြင်းသည်။ "
၂.၆၃ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသော ၂၅ ဒသမ ၆ ကာရက်ရှိသည့်စိန်ပွင့်တစ်ပွင့်ဖြင့်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောင်ပြောင်တောက်ပသောပန်းရောင်စိန်ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ပခုံးသည်ကြီးမားသောစိန်များဖြင့်အရွယ်အစား ၅၁ အရွယ်ရှိသည်။
လက်စွပ်ကို ၂.၆၃ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသော ၂.၆၃ ကာရက်ရှိ Fiant Vivid Purplish ပန်းရောင်စိန်၊ သဘာဝအရောင်၊ SI1 Clarity ဖြင့်နှလုံးပုံသဏ္diamondာန်ရှိသောစိန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြိုတင်ရောင်းချမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၉၉၆,၄၉၃ - ၂၉၉၄၇၃၉ ဖြစ်သည်။
ဒုတိယလက်စွပ်ကနောက်တစ်ခု ထိပ်တန်းနီလာနှင့်စိန်လက်စွပ်, 1930.
အလေးချိန် ၁၄.၀၁ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောကူရှူပုံသဏ္sapာန်နီလာ၊ တောက်ပသော၊ အကျီင်္နှင့်စည်စိန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအရွယ်အစား ၅၄ အရွယ်၊ ပလက်တီနမ်အတွက်ပြင်သစ်အကဲဖြတ်အမှတ်အသားနှင့်ပြင်သစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ်သူအမှတ်အသား။
ကူရှင်ပုံသဏ္sapာန်နီလာသည်အလေးချိန် ၁၄.၀၁ ကာရက်ရှိပြီးတောက်ပသော၊ ခုတ်ဖြတ်ထားသောနှင့်အိတ်ဆောင်စိန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် SSEF အစီရင်ခံစာနှင့်Gübelinအစီရင်ခံစာတို့ပါရှိသည်။ တစ်ခုစီတွင်နီလာသည်အပူရှိန်နှင့် 'တော်ဝင်အပြာ' အရိပ်အယောင်များမပါရှိသည့်ကက်ရှမီးယားမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ရောင်းချမှုတွက်ချက်မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၈၇၈၄၈ မှ ၁,၄၈၆,၉၇၁ ဖြစ်သည်။
လာမည့် ခမ်းနားရတနာနှင့် Noble ရတနာ မေလ ၁၅ ရက်တွင်ဂျီနီဗာမြို့၌ကျင်းပပြုလုပ်သောလေလံပွဲတွင်ထင်ရှားသောဒီဇိုင်နာများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်သူများ၏လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အတူထူးခြားသောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်များနှင့်ရှေးဟောင်းရတနာများပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများနှင့်စုဆောင်းသူများသတိမထားမိရန်။
ပုံအားလုံးသည် Sotheby's ၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။
Tags:လလေံပှဲ • အပြာရောင်စိန် • ခမ်းနားရတနာနှင့် Noble ရတနာ • တော်ဝင်ရတနာ • Sotheby ရဲ့
မှတ်ချက်0ခုFarnese Blue - Sotheby's မှတော်ဝင်သမိုင်း"